Nei Kylie Jenner naTravis Scott vakarambana - chikonzero chinodzokororwa - Nhau
Kuru Blog Nhau Style Macelebs
Rimwe chete zuva mushure mekunge TMZ yaburitsa nhau kuti Kylie Jenner uye Travis Scott aive split mushure memakore maviri nehafu yekufambidzana, chiteshi ichi chiri kutaura zvakaitika uye nei, zvinodaro, vakazvitumidza kuti kurega.
Kunyangwe paine chokwadi chepaTV-nyeredzi-yakachinja-runako mogul hupenyu hwepamusoro-soro nemurapi, zvinoitika kuti pane chikonzero chakajairika mushure mekurambana, sekureva kweTMZ. 'Zvichitaurwa zviri nyore… zvinyorwa zvedu zvinoti vakadanana,' TMZ inonyora .
chii chakaitika kuna candace pamaonero
Vaviri ava vakafamba nekukurumidza - Kylie, 22, akabata nhumbu pasina nguva refu atanga kufambidzana naTravis, 27, muchirimo cha2017 uye vakagamuchira mwanasikana Stormi mukutanga kwa2018.Ipapo kwakauya icho TMZ inorondedzera se'chikamu chakareba kwazvo chehusiku chakange chizere zverudo, kutenderera, kuenda kumazororo 'nekurera musikana wavo mudiki.
2019 yakazadzwa nepamusoro uye pasi. MunaKukadzi, vaviri ava vakaita misoro mushure mekunge Kylie ataurwa akapomera Travis kusavimbika mushure mekunge awana, sekutaura kweTMZ panguva iyoyo, 'akati wandei wezvaakaona 'ane hushamwari zvakanyanya' maDM pakati pa [Travis] nevakadzi vakati wandei vaaitaura navo 'achiri parwendo. (Mumiriri wake akaramba Travis kubiridzira.)
Rich Fury / Getty Mifananidzo
Vakadzoka kubva mukukanganisa uye, sekuudzwa kwakaitwa TMZ, vaive nezhizha rakanaka mushure mekunge Travis apedza rwendo rwake rwe'Astroworld 'mukupera kwaKurume ndokubatana naKylie pazororo rinoshamisa reEuropean kupemberera zuva rekuzvarwa kwake makumi maviri nemaviri muna Nyamavhuvhu.
Asi pavakasvika kumba, TMZ inonyora, 'zvese zvakadzikira uye vakatarisana nekukuya kwehupenyu chaihwo ... uye zvinhu zvakanzwa zvakasiyana pakati pavo.'
Vakashanda pairi kwemavhiki mashoma - Kylie naStormi vaive vakarurama padivi paTravis pakuratidzwa kweiyo 'Tarisa Amai Ini Ndinogona Kubhururuka' kuratidzwa kwekutanga kweNetflix munaAugust 27 - asi vakakurumidza kusarudza kumbotora zororo, TMZ inoshuma.
Sekutanga kwakaita TMZ pazvaitika nhau, 'vanga vachiedza kuita kuti hukama hwacho hushande kwechinguva, asi masvondo akati wandei vakasarudza kusiya - zvirinani izvozvi.'
Jon Kopaloff / FirimuMagic
Vanhu yakayerwa mukati, sosi iri padyo naKylie achiudza magazini kuti, 'Vari kutora nguva asi [havana] kupedza. Vachine nyaya dzekuvimba asi matambudziko avo akakonzerwa zvakanyanya nekushushikana nemararamiro avo. '
Mukumuka kwenhau dzekurambana, zvakabuda kuti hapana mutambo wekubika kana zvasvika pakuchengeta kwemwanasikana Stormi. Zvitoro zvakawanda zvakataura kuti vekare vanozogoverana kuchengetwa.
caitlyn jenner anoda kuchinja kumashure
Uye maererano TMZ , gadziriro yekuchengeta haisi yepamutemo nekuti, sehanzvadzi dzakura Kourtney Kardashian naKhloe Kardashian, vese vane vana vane exes, Kylie naTravis vanewo akasarudza kumborega chibvumirano chakanyorwa . Kwayakaudzwa Isu Vhiki kuti sekuziva kunoita Kylie naTravis izvo zvinotevera kwavari, kuchengetwa kwaStormi 'haisi poindi yekukakavara.' Travis achiri kuronga kuve 'akabatikana kwazvo muhupenyu hwaStormi,' sekureva kwechipiri wemukati.
Diane Kruger naNorman Reedus vakafananidzirwa pamwechete mushure mekutaurwa kwerwendo
danny devito rhea perlman kurambana
caitlyn jenner achidzokera kumurume
gloria vanderbilt mwanakomana stan stokowski